माग्ने बुढाले भेट्टाए आफ्नै डुब्लिकेट ! « Ramailo छ
माग्ने बुढाले भेट्टाए आफ्नै डुब्लिकेट !
राजेश हमाल, अनमोल केसी, साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह पछि अब चर्चित हाँस्य व्यांग्य कलाकार केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाको पनि डुब्लिकेट भेटिएका छन् । माग्ने बुढाको डुब्लिकेट कुनै मिडिया या व्यक्तिले भने भेट्टाएका होइनन् । उनी आफैंले आफु जस्तै अनुहार भएका व्यक्ति पत्ता लगाएका हुन् । आखिर को हुन त माग्ने बुढाको डुब्लिकेट ?
माग्ने बुढा आफैंले खुलाए अनुसार उनको डुब्लिकेट नृत्य निर्देशक शिव वि.क हुन् । लोक दोहोरीका व्यस्त नृत्य निर्देशकसँग विफी खिचेर केदारले आफ्नो फेसुबकमा फोटो सेयर गरेका छन् । ‘म जस्तै देखिने यी व्यक्ति हुन् मित्र नृत्य निर्देशक शिव विक’ भन्दै केदार घिमिरे माग्ने बुढाले फेसबुकमा फोटो हालेका हुन् । केदार र शिवबिच विशेषतः दाह्री मिल्न आउँछ । अरु के के मिल्छ ? फोटो हेरेर तपाईं आफैं पत्ता लगाउनुस् ।